R W Cabdi Weli oo la kulmay madaxweyne ku xigeenka Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo uu hoggaaminayo oo ku sugan Kenya ayaa magaalada Nairobi kula kulmay madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya, William Ruttu.
Kulanka waxaa ka qeybgalay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya C/llahi Goodax Barre, wasiirka maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane, wasiir ku xigeenka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga, Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamed Cali Nuur Ameeriko iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda Kenya.
Kulanka oo ahaa mid muhiim ah ayaa inta uu socday waxaa diiradda arrimo ku saabsan wada shaqeynta labada wada, iyadoo Soomaaliya ay joogaan ciidamo ka socda Kenya oo mardambe ku biiray AMISOM.
Kulanka oo aad u dheeraa kaddib markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa wadajir Saxaafadda ula hadlaya ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Rutta.
Madaxweyne kuu xigeenka dalka Kenya, William Rutta ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin labada dal oo wadaagga amniga iyo isku xerka dhanka ganacsiga, taas oo uu sheegay in ay jiraan kooxaha ka soo horjeeda sidii loo sii wadi lahaa, hasa yeeshee waxa uu carrabka ku adkeeyey in marnaba aan laga gaabin doonin sidii Soomaaliya iyo Kenya wadajir wax ugu qabsan lahaayeen dhinacyada ammaanka iyo dhaqaalaha.
Dhanka kale Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa isaguna sheegay in sii socoshada iskaashiga labada dal uu yahay mid muhiim u ah gobolka oo dhan.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa isla maanta la kulmay masuuliyiin ka socotay hey’adaha Qaramada Midoobay ee dhanka gargaarka, waxa uu kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha bini’aadannimo ee ka jira degaanno ka mid ah dhulka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wefdi uu hoggaaminayo ee ku sugan maalintii labaad magaalada Nairobi, ayaa maalinta berrito ah ka qeyb geli doona shir ballaan oo looga hadlayo xaaladaha bini’aadannimo ee Soomaaliya oo ay soo qaban qaabiyeey Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub.